November 10, 2020 - Padaethar
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား…
November 10, 2020 by Padaethar
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပျိုဖော်ဝင်ပြီလို့ ထင်လိုက်ပြီလား… ပျိုမေတို့ဟာ မိုးလင်းလို့ အိပ်ရာကထလိုက်တာနဲ့ အိပ်ရာခင်းပေါ်မှာ ဘာတွေ့မလဲ၊ လုံချည်မှာ ဘာတွေ့မလဲလို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရင်တွေဖိုရတာရယ်၊ မှန်ထဲ ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်လောက်များဖွံ့ထွားပြီး စွင့်ကားလာပြီလဲလို့ သုံးသပ်ရတာရယ် ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ထင်တဲ့အတိုင်း အပျိုရိုင်းစိတ်တွေ ဝင်လာပြီလို့သာ မှတ်လိုက်တော့။ စိတ်ကူးတွေ ယဉ်ချင်လာတာကနေ ကျောင်းရောက်ရင် ငါ့ကိုကြည့်သူတွေ ရှိရဲ့လား၊ သတိထားသူတွေ ရှိပါ့မ လားလို့ စိတ်ကစားတာ၊ အရွယ်တူယော က်ျားလေးတွေ ရဲ့ ဂရုစိုက်ကြည့်တာများခံလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာ သိမ့်သိမ့် တုန်လောက်အောင် ဖြစ်သွားတာတွေဟာလည်း ငါဘာလဲ ဆိုတာ ကြေညာလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါ တော့တယ်။ ဒီအချိန် အရွယ်တွေမှာ မိဘတွေအတွက်တော့ အတော်လေး သောကပွားရတော့မယ်လို့သာ မှတ်လိုက်တော့။ ကိုယ်က မိဘအရွယ် ရောက်လာပြီ၊ ကိုယ်လည်း … Read more
(၁၀.၁၁.၂၀၂၀) မှ (၁၆.၁၁.၂၀၂၀) ထိ (၇)ရက်သားသမီးများတွက် တစ်ပတ်စာကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
(၁၀.၁၁.၂၀၂၀) မှ (၁၆.၁၁.၂၀၂၀) ထိ ၇ရက်သားသမီးများတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း ဗေဒင်ချစ်သူများတွက် (၁၀.၁၁.၂၀၂၀) မှ (၁၆.၁၁.၂၀၂၀) ထိ ဆရာအောင်ချစ်မင်းရဲ့ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေ… ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းစိတ်လေစိတ်နှစ်ခါဖြစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။စိတ်ရှည်ရှည်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးအလုပ်လုပ်သင့်ပါသည်။အထင်လွဲစွပ်စွဲခံရတာတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်ဦးကိစ္စတွေမတင်မကျဖြစ်တတ်သည်။ပြည်တွင်ခရီးကောင်ပါသည်။စက်မှုလုပ်ငန်တွေလွဲချော်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။အလုပ်လုပ်ပြီးငွေတွေမြုပ်နေတတ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းရာထူးနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးခွဲခွာနေထိုင်ရတတ်သည်။ သင့်ကျန်းမာရေးကတောသွေးအားနည်းတတ်သည်။သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအနက်ရောင်ဖြစ်ပါသည်။သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၅၇အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။အိမ်ဘုရားတွင်ပေါင်မုန့်(၅)ခုလှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ ဆရာအောင်ချစ်မင်း ( ဗေဒင်ရွာ ) တနင်္လာ…. ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းအစစအရာရာသတိကြီးစွာထားဖို့လိုအပ်ပါသည်။ရန်များသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ပြဿနာတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတတ်ပါသည်။ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်လည်းသူတပါးကိစ္စတွေဖြေရှင်းရတတ်ပါသည်။သတိထားပါ။ ခရီးကံတော့အလွန်ကောင်းပါသည်။မိတ်ဆွေတွေရဲအကူညီကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မည်။အိမ်ကိစ္စ ၊အဖိုးတန်းပစ္စည်းအရောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။အိမ်အဆာက်ပစ္စည်း၊အုတ်၊သစ်၊အသီးနှံလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ မြေ၊အမွေ၊ပညာရေးကိစ္စတွေကတော့ဆုံးဖြတ်ရခတ်လိမ့်မည်။ငွေကြေးကအဝင်ထါက်မျှတပါလိမ့်မည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်ရဲသတင်းကောင်းကြားရမည်။ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးဝေးလေကောင်းဆိုတဲ့ကိန်းမျိုးကျနေပါသည်။ ကျန်မာရေးအစာအိမ်ရောဂါဖြစ်တတ်သည်။သတိထားပါ။သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါသည်။သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၁၆အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။အိမ်ဘုရားတွင်သာသနာ့အလံ(၆)လက်လှူပြီးလိုရာဆုတောင်းပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ ဆရာအောင်ချစ်မင်း ( ဗေဒင်ရွာ ) အင်္ဂါ…. ဒီရက်အတွင်းအိမ်၊ဆိုင်၊စက်၊အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်လာတတ်သည်။တစ်ခုတော့ရှိတယ်ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေတော့ထွက်တာပျက်တာတွေများနေတတ်ပါသည်။ ဒီအချိန်မှာငွေများများမကိုင်ထားသင့်ပါအဲဒီငွေကဆေးဖိုးဖြစ်သွားတတ်ပါသည်။ဆန်ဆီဆေးဆားစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတော့အထူးအကျိုးပေးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။စပ်တူလုပ်ငန်းသစ်တွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ အဆောက်ဦးကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ခရီးသွားလာရေးကိစ္စတွေကတော့အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်နေတတ်ပါသည်။နိုင်ငံခြားခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မထင်မှတ်ပဲအခွင့်လမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေရင်း၊ဆရာအရင်းတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။ဘာလုပ်လုပ်ဒီအချိန်မှာစိတ်အနှောက်ယှက်တွေဖြစ်နေရတတ်သည်။စိတ်ကိုရှည်ရှည်ထားပြီးအလုပ်လုပ်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ ငွေကိစ္စတွေကတော့အထွက်များနေတတ်ပါသည်။သင့်ကျန်းမာရေးကတော့အနည်းငယ်ဖျားနာတတ်သည်။အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အထစ်အငေါ့လေးတွေပြေလည်သွားလိမ့်မည်။ ငယ်ရွယ်သူများအချစ်ရေးကံနိမ့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။သင့်အတွက်ကံကောင်စေသောအရောင်မှာနီညိုရောင်ဖြစ်ပါသည်။သင်ထီထိုးမယ်ဆိုရင်ကံကောင်စေမည့်ဂဏန်း၁၃အတွဲဟာသင့်အတွက်ကံကောင်းစေပါသည်။ သင့်အတွက်ကံကောင်းစေရန်ယတြာကိုလည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။အိမ်ဘုရာတွင်ဇော်စိမ်း(၈)ညွန့်လှူဒါန်းပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်ပါ။ သင်၏ အခက်အခဲအားလုံးတို့သည် ပြီးစီးအောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ဟု ကျွန်ုပ်မှ ယုံကြည်သည်။ … Read more
ယောင်္ကျာံးကောင်း နဲ့ ယောင်္ကျာံးပျော့ ဒီနေရာမှာ ယောင်္ကျာံးကောင်း နဲ့ ယောင်္ကျာံးညံ့လို့ မသုံးဘဲ ယောင်္ကျာံးကောင်း နဲ့ ယောင်္ကျာံးပျော့ လို့ သုံးပါရစေ။ယောင်္ကျာံးကောင်းဆိုတာ ကိုယ့် မိန်းမ ကိုအရမ်းချစ်တတ်တယ်။ ယောင်္ကျာံးပျော့တွေကျတော့ ကိုယ့်ကိုကိုပိုချစ်တတ်ပါတယ်။ယောင်္ကျာံးကောင်းများဟာ မိန်းမနဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်မကောက်တတ်ပါ…။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူကို စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်းထက် ပျော့ညံ့တဲ့အရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကို သူတို့နားလည်ထားလို့ပါပဲ။ ယောင်္ကျာံးပျော့များကျတော့ အိမ်မှာဘယ်သူသာသလဲဆိုတာ ပြိုင်နေတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အိမ်မှာသနားစရာကောင်းတဲ့ သြဇာလေးကို ရနေသေးလို့ပါပဲ။ ယောင်္ကျာံးကောင်းများဟာ မိသားစုရော အလုပ်ပါ ကြည့်ရူ့စောင်မနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးအဖြစ် ဘယ်တော့မှ သဘောမထားပါဘူး။ ယောင်္ကျာံးပျော့များကျတော့ နေ့တိုင်းညီးငြူနေတတ်ပါတယ်။ မင်းတို့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ငါအကုန်လုံးဆုံးရူံးလိုက်ရပြီ။ ယောင်္ကျာံးကောင်းများအတွက် မိန်းမဆိုတာ အားနွဲ့တယ်။ အလိုလိုက်မယ်။ ယုယမယ်။ မိန်းမဆိုတာချစ်ဖို့ယူထားတာဖြစ်တယ်။ ယောင်္ကျာံးပျော့များအဖို့ကျတော့ မိန်းမ နဲ့ နွား မသနားနဲ့တဲ့၊ တစ်ခုခု အငြင်းအခုန် … Read more
နှစ်သုံးဆယ်လုံးလုံး ဟော်တယ်ထဲနေပြီး အတွဲချောင်းလာသူရဲ့ အတွေ့အကြုံ
Gerald Foos ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ Colorado မှာ နေထိုင်ပြီး သူဟာ ဟော်တယ်အပိုင်တစ်လုံးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟော်တယ်နာမည်ကတော့ The Manor House Hotel ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဟော်တယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပေမယ့် စုံတွဲတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်တွေမှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1966 ခုနှစ်ကနေ စပြီး Gerald Foos ဟာ သူ့ဟော်တယ်ကို လာတည်းသမျှ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ အခန်းကို နှစ် 30 တိတိ ချောင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ ချောင်းကြည့်ဆုံး လူသားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အခန်းတွေတိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်အပေါက်တွေ ဖောက်ပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာကနေ ချောင်းကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မိန်းမရပြီးချိန်ထိ ဒီလို အလုပ်ကို လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ သူ့မိန်းမကိုပါ ခေါ်ပြပြီး ချောင်းကြည့်သူဟာ နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့ဟာ တချို့စုံတွဲတွေရဲ့ အပြုအမူကို သရော်တာ ရယ်ပွဲဖွဲ့တာမျိုးလုပ်ပြီး ချောင်းကြည့်တဲ့ … Read more
အိမ်ကမိန်းမကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ
အိမ်ကမိန်းမကိုကွာရှင်းပြီး နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ ယောက်ျား ၁ ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာ အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဖတ်ကြည့်ရင် အကျိုးမယုတ်မယ့် စာ (ဘာသာပြန်) အိမ်ထောင်ရှိရှိ မရှိရှိ ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ် ကျွန်တော့်ဇနီး ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ “မင်းကိုငါ ပြောစရာရှိတယ်” သူကတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထိုင်နေပြီး ညစာစားနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ နာကျင်မှုကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ကစပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘာတွေ တွေးနေတယ် ဆိုတာကို သူ့ကိုပြောရမှာပါ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စပေါ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ ကျွန်တော်စပြောခဲ့တယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကျွန်တော့်စကားလုံးတွေ ကို စိတ်ပျက်နေပုံမတွေ့ရဘူး။ ကျွန်တော့်ကို နူးညံ့စွာပဲ မေးခဲ့ပါတယ်။ “ဘာကြောင့်လဲ” တဲ့။ သူ့မေးခွန်းကို မဖြေဘဲ စကားလွှဲလိုက်ပါတယ်။ … Read more
“မွေးခါစကလေးကိုပွေ့ချီပြီးမဲသွားထည့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို အလှူငွေပေးအပ် ဂုဏ်ပြုလှူဒါန်း”
“မွေးခါစကလေးကိုပွေ့ချီပြီးမဲသွားထည့်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို အလှူရှင်များက ၃သိန်း ဂုဏ်ပြုလှူဒါန်း” အနာဂတ်တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်အသက်ကိုဂရုမစိုက်ပဲမွေးကင်းစကလေးကိုပွေ့ပြီး…. နိုဝင်ဘာ(၈)ရက်နေ့ကမဲရုံတွင်အခက်အခဲကြားမှနေပြီး…. အသဲကြားကမဲတစ်ပြားမဆုံးရှုံးစေရန်အတွက်… တာဝန်ကျေသော မုံရွာကမိန်းကလေးအတွက်…. ဘုန်းဘုန်းဦးလှတော၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းများအား… ပါရမီဖြည့်ပေးနေကြသော ကိုဘိုလုံ+မဖြူဖြူအေး မိသားစုက ကျပ်တစ်သိန်း၊ ကိုဉာဏ်လင်းမြင့် မိသားစုမှ ကျပ်နှစ်သိန်းအားဂုဏ်ပြုလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ #36Myanmar #2020election/ unicode “မှေးခါစကလေးကိုပှခြေီ့ပွီးမဲသှားထညျ့ခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးကို အလှူရှငျမြားက ၃သိနျး ဂုဏျပွုလှူဒါနျး” အနာဂတျတိုငျးပွညျပွုပွငျပွောငျးလဲရေးအတှကျအသကျကိုဂရုမစိုကျပဲမှေးကငျးစကလေးကိုပှပွေီ့း နိုဝငျဘာ(၈)ရကျနကေ့မဲရုံတှငျအခကျအခဲကွားမှနပွေီး အသဲကွားကမဲတဈပွားမဆုံးရှုံးစရေနျအတှကျ တာဝနျကသြေော မုံရှာကမိနျးကလေးအတှကျ ဘုနျးဘုနျးဦးလှတော၏သာသနာပွုလုပျငနျးမြားအား ပါရမီဖွညျ့ပေးနကွေသော ကိုဘိုလုံ+မဖွူဖွူအေး မိသားစုက ကပျြတဈသိနျး၊ ကိုဉာဏျလငျးမွငျ့ မိသားစုမှ ကပျြနှဈသိနျးအားဂုဏျပွုလှူဒါနျးပေးခဲ့ကွပါတယျ။ #36Myanmar #2020election/
အိုင်ဖုန်း ၈ အတွက် အပျိုစင် ဘဝ ပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည့် မိန်းကလေးအား ပညာပေး
အိုင်ဖုန်း ၈ လိုချင်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ အပျိုစင် ဘဝ ကို ပေးမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး တဦးဟာ အကြံအစည် မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ ပညာပေး ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ အဖြစ်အပျက် ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရှောင်ချန်အမည်ရတဲ့ မိန်းကလေး ဟာ အွန်လိုင်း ဖိုရမ် တခုပေါ်ကနေ အိုင်ဖုန်း ၈ အတွက် အပျိုစင် ဘဝ ကို ပေါင် ၂၃၀၀ နဲ့ လဲမယ်လို့ ကြေညာထားခဲ့တာပါ။ ဘလော့ဂ်ဂါ တဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် နန်နာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တဦးက ဒါကို တွေ့သွားပြီးနောက်မှာ မိန်းကလေး ကို နောက်ပြောင်ပညာပေးဖို့ စနစ်တကျ … Read more
လင်​မယားနှစ်ယောက်ကို နေစရာနဲ့ လစာ​ ၅ သိန်းပေးထားပြီး ဆန်​တစ်​အိတ်​ ဆီ၁ပုံးကို ​ဘောက်​ဆူးအဖြစ်​နဲ့ ပိုက်​ဆံ ၁၅သိန်း​ပေးလိုက်သောအခါ
လင်​မယားနှစ်ယောက်ကို လစာ​ ၅ သိန်းပေးပြီး နေစရာလည်း​ပေးတယ်​…ဆန်​တစ်​အိတ်​ ဆီ၁ပုံးနဲ့ ​ဘောက်​ဆူးအဖြစ်​ ပိုက်​ဆံ ၁၅သိန်း​ပေးလိုက်သောအခါ လင်​မယားစုံတွဲ တစ်​တွဲဟာ အဖိုးအို တစ်​​ယောက်​ဆီမှာ အလုပ်​လုပ်​ကြပါတယ်​ …။ အဖိုးအိုက အဲ့လင်​မယားကို တစ်​​ယောက်​ ၂ သိန်းခွဲ ဆီ လစာ​ပေးထားပြီး၂​ယောက်​​ပေါင်း ၅ သိန်း မှန်​မှန်​​ပေးပါတယ်​ …။ နေစရာလည်း​ပေးတယ်​ ဆန်​ တစ်​အိတ်​ ဆီ၁ပုံးနဲ့ ငါး​ခြောက်​​တွေ ဘာ​တွေ ပါ​ထောက်​ပံ့ ​ပေးပြီး စရိတ်​ငြိမ်း ထား​ပေးတာပါ …။ သူတို့လင်​မယားနှစ်​​ယောက်​ရဲ့ တာဝန်​က တစ်​ရက်​ကို ၂ ခါ မနက်​တစ်​​ခေါက်​ ည​နေ တစ်​​ခေါက်​ အဘိုးကြီးရဲ့ငါးကန်​ ထဲက ငါး​တွေကို ငါးစာ​ကျွေး​ပေးယုံပါပဲ …။ အဲ့အလုပ်​ပြီးတာနဲ့ သူတို့လင်​မယား စုံတွဲလုပ်​ချင်​ရာလုပ်​ လို့ရပါတယ်​။ သူတို့အ​နေနဲ့ … Read more
သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်များ
သောကြာသားသမီးလေးတွေရဲ့ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်များ သောကြာသားသမီးလေးတွေမှာ သူများနဲ့မတူတဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအားသာချက်တွေကိုသာ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်ရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကန်ပါပဲ…။ (၁) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ လှပခြင်း၊ အချစ်နဲ့ သာယာခြင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုကြပါတယ်….။ (၂) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ အဆို၊ ပန်းချီလိုမျိုး အနုပညာအလုပ်တွေကို အထူးခုံမင်နှစ်သက်သလို ထူးကဲတဲ့ပါရမီလည်း ပါလာတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်….။ (၃) သင်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းတတ်သူပါ ဒါပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကိုထိရှလွယ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ….။ (၄) သောကြာသားသမီးလေးတွေဟာ စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အလျောက် အသည်းကွဲတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုနာကျင်မှုတွေ ပေးသွားတဲ့အခါမှာ လွယ်လွယ်နဲ့ပြန်ပြီး မကုစားနိုင်ကြပါဘူး…။ (၅) သင်ဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို စာနာနားလည်ပေးတတ်လွန်းလို့ သင့်မှာအပေါင်းအသင်းတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပါ…။ (၆) သောကြာသားသမီးတွေဟာ … Read more
ချစ်သူ ကောင်မလေးကို တကယ်ချစ်မှ အောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ
မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ်….ချစ်သူ ကောင်မလေး ကို တကယ်ချစ်မှ အောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ် …ဘာအကြောင်းရှိရှိ မအော်ပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါ ….သူတို့ပဲအော်ပါစေ… လက်မပါနဲ့…. မိဘ တွေကတောင် မရိုက်ရက်တဲ့နုနယ်တဲ့ မိန်းကလေး ပါ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ အော်တာတောင်လွန်လှပီ သူ့ မိဘ ထက် မင်းကပိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ရင်တောင် လက်ပါဖို အခွင့်အရေးမ ရှိဖူး ( ခုတလော မိန်းကလေး တွေကပဲလက်ပါနေသလိုပဲ ) အလိုလိုက်ပါ. အလျှော့ပေး ပါ. သည်းခံပါ.. သူမကိုအလျှော့ပေးတာက ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သဘောပါပဲ….ချစ်သူဘဝမှာတောင်အလျှော့မပေးနိုင်ရင် လက်ထပ် ပီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါ့ ချစ်သူ က ငါ့ကိုဘယ်လောက်အလျှော့ပေးတယ် ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုပီး … Read more